သဒ္ဓါဖြူ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
“ လူ့ဘ၀ရောက်တုန်း ကံကောင်းအောင်လုပ်ကြ ”
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 6, 2014 တွင်12:34am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
တိရစ္ဆာန်ဘ၀ပေါင်းများစွာမှာ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့ပြီးပြီ။ လူ့ဘ၀ဆိုတဲ့
နေသာတဲ့နေ့ရက်တွေမှာ ကံကောင်အောင် လုပ်ကြပါတော့။ ဒါနက
ကောင်းကံတွေ ဆည်ပေးနေသမျှ၊ သီလက စင်ကြယ်အောင် လုပ်ပေး
ရမယ်။ အတိတ်ဘ၀က အကုသိုလ်တွေ ဆိုးကျိုးတွေ၊ ဒီဘ၀ရဲ့ အကုသိုလ်
တွေကို သီလဖြင့် ဖယ်ရှားပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါနပြုတိုင်း သီလဆောက်
တည်ရတယ်။ ဒါန နဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ စွန့်လွှတ်ရသလို သီလအားဖြင့်
ဒီဘလော့ကို ဇူလှိုင် 4, 2014 တွင်6:46pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
စိတ်ဟာအမတန်မှတုန်လှူတ်တဲ့သဘော၊စိတ်ဟာအမတန်မှ လျှပ်ပေါ်လောလီတဲ့သဘော၊စိတ်ဟာအလွန်တရာမှ တားမြစ်နိုင်ခဲတယ်၊ အလွန်တရာမှစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်။
အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့စိတ်ကိုသိတဲ့သူသည် ကြောင်းကျိုးမြင်သိ ဖြောင့်အောင်လုပ်ရမယ်။ မဖြောင့်တဲ့စိတ်နဲ့…
ရွှေမင်းဝံ ဆရာတော်ဘုရား၏ သတိပဌာန်တရားလင့်
ဒီဘလော့ကို မေ 11, 2014 တွင်11:16pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
ရွှေမင်းဝံ ဆရာတော်ဘုရား၏ အေးမြတဲ့ အသံနှင့်အတူ သတိပဌာန်တရားလေးပါး အကြောင်းကို ဓမ္မကိုချစ်ခင်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ နာယူ နိုင်ကြပါစေခြင်း အကျိုးငှာ အောက်က Link လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဒေါင်းယူနာယူနိုင်ကြပါစေရှင်။
ဒီဘလော့ကို မေ 7, 2014 တွင်6:23pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments3Likes
လက်ဦးဆရာဆိုသည့်အတိုင်း မိဘများသည် အခြေခံကျကျ နားမလည်၍ ဖြစ်နိုင်သလို အပေါင်းအသင်းမှားယွင်းမှုများ ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လူငယ်ဖြစ်သော်ငြားလည်း လူငယ်ဂုဏ်ပုဒ်နှင့်လည်းမညီ ကိုးကွယ်မှုမှာလည်း ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ပါလျက် အခြေခံသီလတရားကိုသော်ဖြင့် နားမလည်၊ နားလည်သော်လည်း မလိုက်နာလျှင် အနာဂတ်၏ အသီးအပွင့်မဖြစ်ခင် ပိုးစား၍ ကြွေကျခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ တိုးတက်မှုဟူသမျှသည် ဗုဒ္ဓ၀ါဒ၌သာ အခြေခံ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်…
Lin Naing liked သဒ္ဓါဖြူ's photo
phyuthi သည်သဒ္ဓါဖြူကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Sai Sai သည် သဒ္ဓါဖြူ's၏ 'ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ နှင့် အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Sai Sai သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ နှင့် အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ချီးမွမ်းကဲ့ရဲ့ မငဲ့ကွက်နဲ့' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'အမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်အပ်သော အကြောင်းတရားငါးပါး (သို့) အဘိဏှသုတ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ဘုရားပေးခဲ့သောဥပမာ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ခြင်းအကြောင်းရင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ '၀ိဉာဉ်ကူးပြောင်းနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'မာန' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'မှန်ကန်သော အသက်မွေးမှု ပြုနိုင်ပါစေ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် သဒ္ဓါဖြူ's၏ 'ဗုဒ္ဓ၏ တနေ့တာဘ၀'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'တကယ်..ချစ်စရာ... ကောင်းရဲ့လား???????' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'မောင်ရင်လောင်းကို နတ်ပြဖို့လိုသလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် ကမ္ဘာကျော်လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အတွေး အမြင် နှင့် မှတ်ချက်များ...' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'ယောက်ျား၊ မိန်းမဖြစ်ခြင်းဟာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့်ဆိုင်လား????' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Red Ribbon From aungaung
8:23pm အချိန်သြဂုတ် 22, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:27am အချိန်အောက်တိုဘာ 13, 2014, တွင် maythu မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်....
12:17am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 19, 2014, တွင် အရှင်သိရိန္ဒ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ နှမ သဒ္ဒါဖြူ နာမည်လေးလိုပဲ ဖြူစင်သော သဒ္ဒါတရား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
9:06pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 6, 2014, တွင် အလင်းမိုက် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလု့းကို မိုက်ဆီ ဘလော့တွေ ပို့ပေးလို့ ပြောချင်တယ်..အစ်မ နဲ့ စကားမပြောဖူးဘူးနော်..ဒါပေမဲ့ မိုက် မေးကို စစ်လိုက်တိုင်း သဒ္ဒါဖြူ ဆိုတဲ့ မေး လေးတွေ တော်တော်တွေ့၇တယ်..ခုလိုပို့ပေးလို့ကျေးဇူးပါ..တခါတလေ ဖတ်လိုက်တာလဲ ၇ှိတယ် .မဖတ်ဖြစ်တာလဲ ၇ှိတယ်..အစ်မလဲ မြန်မာ ဆန်ဆန်နေတတ်တဲ့မိန်းမတယောက်လားလို့ ..မိုက်မေးချင်တယ်..တမျိူးမတွေးစေချင်ဖူး..မြန်မာ ဆန်ဆန်နေတတ်တဲ့ မိန်းမတွေ မ်ြနမာပြည်မျာ လက်ချိုးေ၇လို့၇နေလို့ပါ...ပြီးတော့ အစ်မ ကိုလဲ မြန်မာဆန်ဆန်နေတတ်တဲ့ လူတယောက် ဖြစ်စေချင်လို့ပါ..ဒါပဲနော် အစ်မ ဆီ လာလည်သွားပါတယ်..mice.lovefordie@gmail.com
3:08pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 2, 2014, တွင် ပိသေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဘ၀တစ်ခုမှာဆုံတာဇရပ်တစ်ခုမှာတွေ့ကြသလိုပဲ. . .ခဏတာတည်းခိုမှုမှာတခဏတွေ့ကြတယ်. . .လမ်းချင်းတူတော့ အတူတူဆက်သွားကြတယ်. . .မတူတော့လည်းခွဲခွာသွားကြတယ်. . .ချစ်ခြင်း၊မုန်းခြင်း. . .အညှိုးအတေးထားခြင်းဆိုတာတွေဟာ ပစ္စပ္ပန်ရော ၊အနာဂါတ်ကိုပါပူလောင်စေတယ်. . .ဒါကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုမှ အတင်းကြီးဖမ်းဆုပ်မထားတာအကောင်းဆုံးပဲ. . .အလိုက်သင့်လွှတ်ပေးလိုက်နိုင်သူသာ တကယ်အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုရမှာ။ နှစ်သစ်လက်ဆောင်ပါ။
7:28pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 28, 2013, တွင် ခလှိုင်းကဗျာ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါနော် အစ်မ။ အတွယ်မရှိအောင် ကြိုးစားနေရင်းနဲ့ အတွယ်ကိုမှာ ခလုတ်သွားသွားတိုက်မိနေတာအစ်မ။ နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာ အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံ ပြီးတော့ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ အစ်မရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒ လည်းပြည့်ဝပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်အစ်မ။
2:56pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 12, 2013, တွင် ven.sobana မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းပါစေလို့ ဦးဇင်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။
12:44am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 3, 2013, တွင် ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:32am အချိန်ဒီဇင်ဘာ 3, 2013, တွင် ရှင်ပညာဇောတ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:52pm အချိန်စက်တင်ဘာ 19, 2013, တွင် ပိသေးလေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာပါ . . . ပါရမီဖြည့်ဖက် ဘလော့ပို့လေးကောင်းလို့လက်ဆောင်လာပို့တာပါ။ ပန်းချီလေး စစ်ကြည့်ပါဦးလှရဲ့လားဆိုတာ?